तुलसीपुरका बैंकहरुमा जेष्ठ नागरिकहरुको भिडभाड बढ्दै ( भिडियो सहित) « Online Rapti
तुलसीपुरका बैंकहरुमा जेष्ठ नागरिकहरुको भिडभाड बढ्दै ( भिडियो सहित)
अनलाइन राप्ती २०७८ बैशाख ५ गते आइतवार
दाङ : दाङ जिल्ला कोरोना संक्रमणको अति प्रभावित जिल्लामा पर्दछ । तर, तुलसीपुर बजारका विभिन्न बैंकहरुमा जेष्ठ नागरिकहरु सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनको लागि देखि संयौँको संख्यामा आएका हुन्छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा शनिवार सम्म पछिल्लो समय ५२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । एकातिर स्वास्थ्यकर्मीहरुले जिल्लामा आम नागरिकहरुले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्दा र कोरोना विशेष अस्पतालमा बेडको अभाव हुदाँ संक्रमण दर बढेमा विकराल अवस्था सृजना हुने भन्दै चिन्ता गरिरहेको अवस्थामा जेष्ठ नागरिकहरु भत्ता लिनको लागि बिहान देखि बैंकमा भिडभाड गर्दा झनै अवस्था खतराहरु स्थानियहरुको भनाइ छ । तुलसीपुर ८ का स्थानिय टिकाराम सापकोटाले कोरोना महामारीको बेला यसरी बजारमा भिडभाड गर्न नहुने बताए । उनले यसरी जेष्ठ नागरिकहरुलाई बैंकहरुबाट भन्दा वडाबाट पैसा दिने ब्यवस्था हुनु पर्ने धारणा ब्यक्त गरे । गत बर्ष पनि यस्तै अवस्था हुन्थ्यो बैंकहरुमा जेष्ठ नागरिकहरुको यस पटक पनि उस्तै भएको उनले बताए । त्यसैगरी उनले प्रत्येक वडाहरुले आ–आफ्ना जेष्ठ नागरिकहरुलाई तपाईहरुको पैसा बैंकमा आएको छ ।
त्यो पैसा जहिले निकाल्दा पनि हुन्छ, भनेर जनचेता गराउनु पर्ने समेत उनको भनाइ छ । ‘ स्वास्थ्य मन्त्रालयले दाङलाई कोरोना अति प्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्ने,’ उनले भने,‘ यहाँका बजारहरुमा भने भिडभाड धेरै हुनुले पनि धेरै चिन्ताको बिषय बनेको छ । यसतर्फ सम्बन्धित निकायले बेलैमा ध्यान दिन जरुरी छ । कोरोनाबाट धेरै प्रभावित हुने भनेका नै बालबालिका र जेष्ठ नागरिकहरु नै हुन् । ’ त्यस्तै, तुलसीपुर उमहानगरपालिका ८ अश्वाराका ७८ बर्षीय दिल बहादुर कुवर ४ महिनाको भत्ता निकाल्नको लागि विहान ७ बजे नै बैंकमा आएको बताए । उनले पछिल्लो समय कोरोनाको त्रास भएता पनि औषधि गर्नको लागि पैसा नुहदाँ निकाल्न आएको र यसरी बैंकहरुमा आएर लाइन लाग्नु भन्दा वडाबाट दिएको भए आफुहरुलाई सहज हुने बताए । ‘ ४ महिनाको भत्ता अहिले आएको छ ,’ उनले भने,‘ आफु विरामी मान्छे औषधि गर्नको लागि भएता पनि पैसा निकाल्नु नै प¥र्याे । तर, अहिले कोरोनाको त्रास त छ । आफुले माक्स लगाएको भएता पनि के गर्नु ? बैंकमा लाइन बस्नु पर्छ । भिडभाड धेरै हुन्छ । कोरोना जोखिम नै छ ।’ त्यस्तै तुलसीपुर उपमहानगरपालिका ८ कटकुइयाकी एक सय बर्षीया विरमाया डाँगी पनि भत्ता आएको पैसा निकाल्न बैंकमा आएको बताइन् । उनले अहिले सम्म आफुलाई कोरोना रोग के हो ? भन्ने बारेमा थाहाँ नपाएको बताइन् ।
उनले भनिन्,‘ मासिक ३ हजारको दरले भत्ता पाइन्छ । अहिले ४ महिनाको पैसा आएको छ । विहानै अटोमा आएकी हु । ’ यता तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले भने कोरोना पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण दर बढ्दै जान थालेपछि विभिन्न सहज रहनको लागि सचेतना मुलक प्रचार प्रसार गरिरहेको जनाएको छ । उपमहानगरले बजारमा बढि भिडभाड नगर्न, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गर्दै आइरहेको र यदि आम नागरिकहरुले बेवास्ता गरेमा कडा कदम चाल्ने उपमहानगरका प्रवक्ता सुर्य बहादुर डाँगीले जानकारी दिए । उनले हिजो आज बैंकहरुमा जेष्ठ नागरिकहरुहररु भिडभाड हुन लागेको भन्दै आफुहरुले प्रत्येक वडाका जेष्ठ नागरिकहरुलाई कोरोनाको महामारीको समयमा बैंकहरु भिडभाड नगर्न आग्रह गर्दै आइरहेको समेत बताए । उनले सामाजिक सुरक्षा भत्ता चैत्रमा आउने भएकाले पनि जेष्ठ नागरिकहरु एकसाथ पैसा निकाल्न आउँदा बढि भिडभाड हुने गरेको समेत बताए ।